Maxaa ka jira in ciidankii hore ee ilaalada madaxtooyada lagu badalay ciidamo kale oo cusub? – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Maxaa ka jira in ciidankii hore ee ilaalada madaxtooyada lagu badalay ciidamo kale oo cusub?
Waxaa saacadihii ugu dambeysay soo baxaayay warar sheegaya in ciidamadii koofiya gaduudda ee ilaalada ka aheyd gudaha xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho shaqadii laga joojiyay, islamarkaana si KMG ah lagu badalay ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Gaashaan.
Ciidamada Gaashaan ayaa la sheegayaa inay si KMG ah u ilaalin doonaan ammaanka gudaha xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, waxaana ciidankaasi wehliya ciidamada nabad-sugida ee loo yaqaano DANAB, kuwaas oo ilaalinta ammaanka madaxweynaha qeyb weyn ka qaadan doonna.
Ciidanka la badalay ee koofiya gaduuda ayaa la sheegayaa inay shaqadooda ku koobnaan doonto oo kaliya ilaalinta afafka hore ee laga soo galo xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya, iyadoona illaa iyo haatan aan la ogeyn sababta keentay in ciidankaasi laga badelo shaqadii ay ka haayeen gudaha xarunta madaxtooyadda Soomaaliya.
Warar hoose ay warbaahinta Bulshoweyn ka heleeyso xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ayaa sheegaya in isbadelkaan uu wado madaxweyne Farmaajo uu hordhac u yahay qorshaha isbadelka ah uu ku damacsan yahay inuu ku sameeyo shaqaalaha ka howlgala xarunta madaxtooyada Soomaaliya.
Ilo kale aynu heleyno ayaa inoo sheegayaa in madaxweyne Farmaajo uu haatan qorsheeynayo inuu gebi ahaan badelo ciidamada haatan illaalada ka ah xarunta madaxtooyada Soomaaliya, kuwaas oo la sheegayo in lagu badali doonno ciidamo cusub oo ka tirsan kuwa Kumaandooska Soomaaliya.